I-AutoSEO vs FullSEO: Yeyiphi Semalt SEO Yenkonzo Ofanele Ukhethe?
UkuSebenza kweinjini yokukhangela sisifundo esinobuqili. Ngelixa phantse lonke ishishini ngoku lixhomekeke kwi-SEO ukubeka umbutho wabo phambi kwamehlo afanelekileyo, kuyinyani nokuba ngabantu abambalwa abaziinjineli abakwaziyo oko iGoogle kunye nezinye iinjini eziphambili zifuna. Ukugcina inqanaba lokudlala, amaqhosha okukhangela ukwenziwa kweinjini ayimfihlo egadwe ngokukhawuleza.
Oku kuthetha ukuba izixhobo ze-SEO kunye neendlela eziphambili zokusebenza azisekelwanga kuseto lwemiyalelo enikezwe nguGoogle, kodwa ngokuvavanya ukuba yintoni esebenzayo nengasebenziyo. Umsebenzi omninzi owenzayo kwiinjini yokukhangela, ukucacisa okufunayo, iimfuno kunye nezinto ozikhethayo kwiinjini eziphambili zokukhangela ziya kuba.
Ku-Semalt sichithe iminyaka eli-10 sihlonipha izakhono zethu ze-SEO. Ngoku sihlalutye malunga ne-1.5 yezigidi zewebhusayithi kwaye siqhayisa malunga ne-600,000 yabasebenzisi ababhalisiweyo. Sinokuqonda okunzulu malunga nokuba kuthatha ntoni ukwenza umbutho wakho ungabi kwiphepha lokuqala likaGoogle, kodwa ungaphezulu kakhulu kuluhlu. Kwiminyaka elishumi edlulileyo, sisebenze nzima ukuba sibe ngumboneleli we-SEO wokukhetha inombolo yemibutho ekhokelayo.
Kodwa yeyiphi kwezi nkonzo zethu ze-SEO onokuthi ukhethe? Namhlanje siza kujonga kwi- AutoSEO yethu nakwiiphakheji ze- FullSEO ; Umahluko, ukufana, kunye nendlela yokufumanisa ukuba yeyiphi indlela elungile kuwe.
Yintoni i-AutoSEO kunye ne-FullSEO?
Into yokuqala ephambili: yintoni kanye kanye i- AutoSEO kunye ne- FullSEO?
Kwinqanaba elibanzi, i-AutoSEO kunye ne-FullSEO ziimveliso ezimbini ezijolise ekwenzeni into enye: yenza nkulu iwebhusayithi yakho ukuphucula ubume beenjini zokukhangela. Ziyimveliso esithe sazenza eSemalt saphuhlisa ngaphakathi, kwaye nganye yasetyenziswa ngamashishini phantse kuwo onke amazwe omhlaba.
Kodwa kwezi zinto zisisiseko zifanayo, iimveliso ziqala ukuphambuka.
I-AutoSEO sisixhobo esikrelekrele esizimeleyo esimele iphakheji yenqanaba lokungena. I-AutoSEO yenzelwe nabani na othatha amanyathelo abo okuqala kwihlabathi le-SEO kwaye abeke umsebenzisi kulawulo.
I-FullSEO yiphakheji yethu ye-SEO epheleleyo. Yenzelwe nabani na okulungeleyo ukuthatha ukukhangelwa kweinjini yokukhangela nzulu kwaye ujonge ezona ziphumo zikhawulezayo, ezikhawulezayo nezide. Ungashiya konke ukuphakamisa okunzima kuthi, njengabasebenzisi be-FullSEO bafumana ukufikelela kwiqela lethu leengcali ze-SEO.
Makhe sihlolisise ezi zisombululo, kwaye sijonge ngqo indlela esebenza ngayo nganye nganye.
Isikhokelo esiya kwi- AutoSEO
Ngaba ufuna ukwandisa ukubonakala kwebranti kunye nentengiso? Ngaba uthatha amanyathelo akho okuqala kwilizwe lokukhangela kwiinjini yokukhangela? Ngaba ufuna ukubona ezinye iziphumo ngaphambi kokuzibophelela kutyalo-mali olukhulu?
I-AutoSEO inokuba yimveliso yakho.
Iphakheji ka-Semalt ye-AutoSEO yenzelwe amashishini afuna ukonyusa isiza, kodwa angafuni kutyala imali ekukhuthazeni indawo kwinqanaba lokuqala, ubuncinci de babone iziphumo zokwenyani. I-AutoSEO ikubeka kwisihlalo somqhubi, ikuvumela ukuba uqalise umkhankaso we-SEO malunga ne- US $ 0.99.
Isebenza njani i-AutoSEO?
Makhe sijonge ukuqhekeka kweyona ndlela isebenza ngayo i-AutoSEO.
Ubhaliso: Uqala inkqubo ngokuzalisa ifom yobhaliso lwe-AutoSEO elula.
Uhlalutyo lwewebhusayithi : IWebsite yakho ihlaziywa, kwaye i-AutoSEO iya kunika ingxelo ngendlela engene ngayo isiza sakho ngokuchasene nokwakhiwa kwewebhusayithi kunye nemigangatho yecandelo le-SEO.
Ukuphuhliswa kwesicwangciso : Ukusebenza kunye neengcali zethu eziphambili ze-SEO, umphathi wakho we-Semalt uza kuqhuba uhlalutyo olubanzi lwewebhusayithi yakho, kwaye enze uluhlu lweempazamo kunye nokungasebenzi kakuhle ekufuneka kulungiswe.
Ukwenza izindululo zokwenza ingxelo: Nje ukuba sinikwe imvume yokuhambisa ifayile (i-FTP) okanye ulawulo lomlawuli weCMS, iinjineli zethu ziya kusebenzisa iingcebiso ezenziweyo ukuze kuqinisekiswe iphulo le-AutoSEO eliphumelelayo.
Uphando lwamagama aphambili: Injini ye-SEO idala uluhlu lwamagama aphambili ukuba afakwe kwiwebhusayithi yakho, ekhethwe ukwandisa ukuthengisa kunye nokugcwala.
Isakhiwo sokunxibelelanisa : I- AutoSEO iqala ukubeka unxibelelwano lwendalo ukuya nokubuya kwimithombo ethembekileyo kwindawo yakho yonke, yandisa ukubonakala kwayo kwenjini. I-Semalt ine-database yeziko eliphezulu lamaqabane angama-50 000 aphezulu, kwaye amakhonkco akhethwa ngokusekelwe kubudala besizinda kunye ne- TrustRank. Isakhiwo sokunxibelelanisa senziwa ngesantya esilinganisiweyo kwisilinganiselo esilandelayo: I-10% amakhonkco egama lohlobo lwegama, 40% amakhonkco ezinxibelelaniso, ama-50% amakhonkco okungezizo ii-ankile
Ukulandelela umkhankaso: Impumelelo yephulo lakho ilandelwa inkqubo yokuhlaziywa kwegama eliphambili lemihla ngemihla.
Ukuqhubeka nokubeka iliso: I- AutoSEO iyaqhubeka nokubeka iliso kwinkqubela phambili yephulo, ukubonelela ngeengxelo nge-imeyile okanye ngenkqubo yokwazisa yangaphakathi.
I-AutoSEO yenzelwe bani?
I-AutoSEO yenzelwe abo bafuna ukufunda kancinci malunga ne-SEO ngaphambi kokuba benze utyalomali olukhulu. Yabavavanyi kunye nabathengisi abathanda ukucaca nolawulo. Yenzelwe nabani na ofuna ukuqala uhambo lwabo lwe-SEO ngendlela engabizi mali kwaye inolwazi.
Isikhokelo esiya kwi- FullSEO
Ngaba uyafuna ukubalasele? Ngaba uyakuqonda ukubaluleka kokusebenza kweinjini yokukhangela, kwaye ufuna esona sisombululo sibanzi nesisebenzayo? Ngaba uyafuna ukubeka imali kwiqela eliqinisekisiweyo elinokuzisa iziphumo ezilungileyo?
I-FullSEO yiphakheji efanelekileyo.
I-FullSEO yiRoll-Royce yeminikelo ye-SEO kaSemalt. Isisombululo esidityanisiweyo kunye nesicwangciso esibanzi se-SEO kwisiseko sayo. Ufumana uhlalutyo olunzulu oluvela kwiingcaphephe ezikhokelela kushishino, kungekuphela nje kwendawo yakho, kodwa ngeendawo zokhuphiswano kunye niche apho inkampani yakho isebenza khona. Isebenzisa ubuchule obuqinisekisiweyo, obuqinisekisiweyo be-SEO, kwaye inikezela ngophuhliso olupheleleyo lwendawo liqela leengcali zeSemalt eziya kubakho kunxibelelwano oluqhubekayo. Le phakheji iqinisekisa ukukhula okukhulayo kwezithuthi kwiwebhusayithi kunye namazinga okuguqula aphezulu.
Isebenza njani i-FullSEO?
Iphakheji ye-FullSEO inokuqhekeka ibe ngamacandelo amane aphambili: uhlalutyo, ukuphuculwa kwangaphakathi, ukwakha ikhonkco kunye nenkxaso.
Uhlalutyo olunzulu luya kuqhutywa liqela leengcali zeSemalt SEO kunye nomphathi wakho. Olu hlalutyo luya kubandakanya:
Ukuchonga awona magama aphambili anokutsala umdla omkhulu kunye nabona baphulaphuli.
Ukuhlalutya ubume bewebhusayithi kunye nokusasazwa kwegama elingundoqo ukubona ukuba zihambelana njani neendlela ezilungileyo ze-SEO kunye nokukhetha iphepha lewebhu eliya kugxila kukhuthazo lwewebhusayithi.
Ukuqokelela ulwazi malunga neewebhusayithi zabakhuphisana bakho kunye ne-niche ukuze kufikelelwe kwinqanaba eliphezulu kuGoogle.
Nje ukuba uhlalutyo lugqityiwe, iqela leengcali ze-SEO, ezisebenza ngokusebenzisana nomphuhlisi wewebhu waseSemalt, liya kuqhuba ukwenziwa kwangaphakathi kwewebhusayithi yakho ukuze kuhlangatyezwane neekhrayitheriya zokuphononongwa kweinjini zokuphelisa kwaye isuse naziphi na iimpazamo okanye iingxaki ekunokubamba. umva. Isigaba sangaphakathi sokwenza umsebenzi uya kugubungela:
Ukudalwa kwee-meta tags kunye nee-tag tag ngokusekelwe kuhlalutyo lwegama elingaphambili.
Ukuphucula kunye nokucebisa iwebhusayithi ye-HTML khowudi kunye nokubeka iimpawu ezifanelekileyo.
Ukuhlela iirobhothi.txt kunye neefayile ze-.htaccess ukuze iwebhusayithi ibonise kwiinjini zokukhangela njengoko kufanele. Ukwenza ifayile yemephu yokufaka isalathiso kumaphepha ewebhusayithi.
Ukubeka amaqhosha eendaba ezentlalo kwiwebhusayithi ukuze aphuculwe ukuzibandakanya.
Ngelixa kunokuthathwa njengenxalenye yenkqubo yangaphakathi yangaphakathi, ulwakhiwo lwekhonkco lubalulekile ngokwaneleyo ukuze lube linyathelo ngokwalo. Ngexesha lokwakha ikhonkco, iqela lethu leengcali ze-SEO liza:
Cazulula iwebhusayithi yakho 'yokunxibelelanisa ijusi' (inani le-injini yokukhangela okanye i-equity edluliselwe iphepha elinye ukuya kwelinye).
Vala izihlanganisi zangaphandle ezingafunekiyo okanye ezingenabungozi ukuze ugcine umgangatho wephepha.
Chonga iindawo ezilungileyo zokubeka amakhonkco amatsha, asebenzayo ngakumbi.
Yenza ijusi yokudibanisa enxulumene ne-niche efunekayo ukufikelela kwiindawo eziphezulu kuGoogle. Oku kwenziwa ngokudibanisa amakhonkco asemgangathweni kumxholo owahlukileyo onxulumene nesihloko sakho ukukhulisa amandla enyuso yakho.
Impazamo ye-dilesi yemiyalezo engama-404 kwaye ususe amakhinki aqhekekileyo
Okokugqibela kodwa ngeendlela ezininzi, eyona nto ibalulekileyo iphazili ye-FullSEO yinkxaso eqhubekayo enikwa ngumphathi wakho we-Semalt. Umphathi wakho uya kubeka esweni inkqubela phambili yomkhankaso wakho we-FullSEO yonke imihla, esenza uhlengahlengiso kwaye akugcine uthumele onke amanqanaba endlela. Umphathi wakho uya:
Nika ingxelo yemihla ngemihla okanye eceliweyo malunga nenkqubela phambili yephulo.
Ndikunike ukufikelela kwiziko lokunika ingxelo apho unokujonga khona uhlalutyo olucacisiweyo lwephulo.
I-FullSEO yenzelwe nabani na okulungeleyo ukuthatha intsebenzo yokukhangela ngokunzulu, nokuba lelizwe elikhulu okanye ishishini elincinci lasekhaya. Yiphakheji epheleleyo ekuvumela ukuba ubandakanyeke okanye ungabinazandla ngendlela othanda ngayo. Ukuba ujonge ukonyusa ukugcwala kwiwebhusayithi yakho, inqanaba lakho lokuguqula okanye umgca ongezantsi kwenkampani yakho, akukho zixhobo zibhetele zifumanekayo.
I-AutoSEO vs FullSEO: ukwenza umnxeba
Usaqinisekile ukuba yeyiphi iphakheji oza kuyikhetha?
Olunye ukhetho kukuqalisa uhambo lwakho nentsuku ezili-14, akukho mvavanyo yokuqhutywa kwesibophelelo ye-AutoSEO ye- $ 0.99 kuphela. Ukuba uziva ngathi ufuna into engaphezulu, ungatshintshela ngokulula kwi-FullSEO!
Olunye ukhetho kukuva ukuba abathengi bethu bathini na ngokukhetha ngakunye. Jonga iphepha lethu lokungqinisisa abathengi bethu malunga nokuqonda malunga nendlela ezinye iimbutho eziziva ngayo ngepakethi nganye - izinto eziluncedo, izinto eziyimfuneko kunye nezinto ekufuneka ucinga ngazo.
Ekupheleni kosuku, nokuba yeyiphi na iphakheji oyikhethileyo, unokuqiniseka ukuba zombini iwebhusayithi kunye nombutho wakho uphela ungangcono kuyo. Isikhundla seGoogle esiphuculweyo, ukugcwala ngakumbi, izinga lokuguqulwa okuphezulu kunye nomgangatho ongezantsi wokufikelela konke okufikelelekayo.
Akukho xesha lokuchitha. Nxibelelana neqela lethu elinobubele namhlanje!